संसार ै हल्लाउने त्यो अक्टुवर क्रान्ति | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / विचार / संसार ै हल्लाउने त्यो अक्टुवर क्रान्ति
संसार ै हल्लाउने त्यो अक्टुवर क्रान्ति
Posted by: युगबोध in विचार October 26, 2017	0 336 Views
नार ायणप्रसाद शर्मा
मनो वै ज्ञानिकहरु ठो कुवा गरी भन्ने गर्छन्– मान्छे लाई आफ्नै मनभित्रको कुरा सयमा पा“च प्रतिशत मात्र थाहा हुन्छ रे  । यति थो रै ज्ञानले बा“‘च्नु पनि के बा“च्नु ? तर मान्छे बा“चे कै छ । जलराशी अथाह भए पनि आफूलाई चाहिने
प्रतिदिन तीन चार लिटर पानी त हो  । त्यसै ले भन्न सकिन्छ– हाम्रो जीवन मात्र सीमित छै न ज्ञान पनि सीमित छ । त्यो सीमित ज्ञान पनि राम्रो स“ग विकसित हुन दिइन्न । त्यसमा पनि सामाजिक बारबन्धन लागिहाल्छ । महलको सुख शयलमा बस् ने बच्चाको ज्ञान र छाप्रामा बस् ने बच्चाको ज्ञानमा ठूलो अन्तर हुन्न र ?
त्यसै ले भन्न सकिन्छ, ज्ञानको अभिमान कसै ले गर्नुहु“दै न । अपूर्णता दरबारभित्र पनि छ । अपूर्णता महलभित्र पनि छ । भाषा जान्ने हरुले भन्ने गर्छन्– मान्छे को बो ली पा“च लाख वर्ष पुरानो  । जे हो स्, आमाले सिकाएको भाषा नै हाम्रो ज्ञानको पहिलो माध्यम हो  । आमा र सामाजिक परिवे श अनुसार नै बच्चाले सिक्दै जाने हो  । हाम्रो सिकाइ आकाशबाट एक्कासी झनेर् त हु“दै हो इन । त्यसै ले हाम्रो ज्ञानको सीमा छ भन्ने कुरा मान्नै प¥यो  । यस् तो भए पनि कहिले काही मान्छे को ज्ञानले अचम्म पानेर् गरी छलाङ मार्छ ।
हाम्रो सय वर्षभित्रको मात्रै कुरा गनेर् हो भने सात साल, ०४६ र ०६३ साल ठूला छलाङ हुन् मान्छे को चे तनामा बाढी आएको जस् तो † विश्व दृष्टिको णले विचार गर्दा आज सन् १९१७ अक्टुवर २५ तारिख । आजको दिवसलाई अक्टुवर क्रान्ति दिवस पनि भनिन्छ । विश्व इतिहासमा अचम्मको नौ लो छलाङ दिवस ।
यी दिवसहरुले मे रो जीवनमा ठूला–ठूला छलाङ (क्रान्ति) ल्याइदिए । यसको प्रभाव सर्वत्र प¥यो  । वै चारिक उथलपुथल आयो  । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस् कृतिक उथलपुथल आयो  । यसको एउटा सानो साक्षी म पनि भए“ । यस ले खमा म तिनै कुराको संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु ।
म त बाहुनको सन्तान । पण्डितको सन्तान । पुरे तको सन्तान । मे रो घरमा भनिन्थ्यो – ईश्वरको इच्छाबिना पात पनि हल्लिन्न । तर सब झुट्ठा कुरा । समयले राजगद्दी पनि हल्लिने रहे छ । सात सालको क्रान्तिले एक सय चार वर्षसम्मको राणाहरुको राजगद्दी गल्र्यामगुर्लम ढलाइदियो  । ०४६ सालको क्रान्तिले राजतन्त्रलाई सीमित गरिदियो  । त्यो सीमालाई कुल्चे र ज्ञाने न्द्रले राज गर्छु भन्दा ०६३ सालमा राजतन्त्र नै समाप्त भयो  । यस् ता क्रान्तिले यस् ता छलाङमा म जस् ता सामान्य मान्छे हरुले जीवनमा ठूला–ठूला परिवर्तन दे खे ं । दुनिया कहा“को कहा“ पुग्यो  ।
विश्वको इतिहास पनि यस् तै उथलपुथल र छलाङले भरिएको छ । अक्टुवर क्रान्ति पनि यो भन्दा अझ ठूलो थियो  । आज भन्दा सय वर्ष पहिले युरो प महाद्वीपको रुस भन्ने दे शमा जारशाही थियो  । पश्चिमका धे रै मुलुकहरुमा औ द्यो गिक विकास भइसके को थियो  । आफ्नो उद्यो ग र व्यापार फै लाउन पश्चिमाहरु ज्यान फाले र लागे का थिए । बे लायत त्यस बे लाको पश्चिमको ने ता थियो  । त्यसले आफ्नो दे शमा प्रजातन्त्र स् थापना ग¥यो भने एशिया र अफ्रिकाका अरु मुलुकहरुमा आफ्नो साम्राज्य विस् तार गर्न अन्यन्त क्रूर व्यवहार ग¥यो  । त्यसै को परिणमास् वरुप प्रथम विश्वयुद्ध भयो – सन् १९१४ दे खि १८ सम्म । सर्वत्र हाहाकार मच्चिएको थियो  ।
गरिव, किसान, मजदुर मध्यवित्त धे रै जनता शान्ति, समृद्धि र लो कतन्त्रको पक्षमा थिए । रुसमा ले निनले यी सबै को ने तृत्व गरे र अक्टुवर क्रान्ति सम्पन्न गरे । शान्तिको घो षणा गरे  । कलकारखाना मजदुरहरुलाई र जमिन किसानहरुलाई बा“डे  । बा“की बै ंक आदि राष्ट्रियकरण गरे  । यसै लाई भनियो सर्वहारा क्रान्ति, सर्वहारा राज्य, सर्वहारा अधिनायकत्व । जमिनदार, पू“जीपति, ठे के दार, साहुमहाजनको जुग समाप्त भयो  । समाजवादी युगको उदय भयो  । दै ववाद, भाग्यवाद सबै सो त्रान्नै परे  ।
संसारको एक तिहाई भाग कम्युनिष्टहरुको कब्जामा आइसके को कुरा ने पालीहरुले पनि थाहा पाउ“दै गए । तर संसारका धनाढ्य शासकहरुलाई यो क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तन कसरी चित्त बुझो स् ? क्रान्ति गनेर् पनि जनता नै हुन् । त्यहा“ पनि अने क त्रुटि हुनसक्छन्, अपराध हुनसक्छन् । पक्ष विपक्ष सबै हुन्छन् । मौ का छो पे र युरो पका सबै पू“जीवादी दे श मिले र अक्टुवर क्रान्तिको विरुद्ध रुसमा हमला गरे  । हाहाकार मच्चियो  । तर गजब भयो – प्रतिक्रान्तिले हार खायो  । क्रान्तिले विजय ग¥यो  । हिटलर मुसो लिनीको पतन भयो  । दो स्रो विश्वयुद्ध पनि समाप्त भयो  । संसार दुई धु्रवमा बा“डियो – पू“जीवादी धु्रव एउटा । समाजवादी धु्रव अकोर्  । चीनलगायत थुप्रै दे श समाजवादी क्याम्पभित्र परे  । पू“जीवादीहरुले सयौ ं वर्ष लगाएर गरे को विकास रुसले २०÷२५ वर्षमै गरे र दे खाइदियो  । पहिलो चन्द्रलो क पुग्ने दे श रुस भयो  । तर संसारका पू“जीपति र सामन्तहरुलाई असैह्य भयो  । ७५ वर्षपछि रुस ढल्यो , ढालियो  । समाजवाद साम्यवाद खतम भयो भने र झ्याली पिटाइयो  । कम्युनिष्टहरु रक्षात्मक अवस् थामा रहे  ।
तर पनि समस् या त जस् ताको तस् तै  । शो षण, अन्याय, असमानता र भ्रष्टाचार पे mरि मौ लाउ“दै गए । सानातिना युद्धहरु पनि फै लिदै गए । अमे रिका संसारको नाइके भएर संसारै भरि फै लियो  । पूर्वमा पे mरि चीन उदायो  । ने पालमा लो कगणतन्त्र उदायो  । तर ने पालमा यसले आर्थिक, सामाजिक र सांस् कृतिक रुपान्तरण गर्न नसक्दा हाम्रो लो कगणतन्त्र लंगडो जस् तो भएर डल्लिएको छ । घाउमा कीरा पार्न खो ज्छन् पुराना सामन्तवादीहरु । नया“ पुराना पू“जीवादीहरु र लुटाहाहरु । अब झण्डै सय वर्षको क्रान्तिको इतिहासबाट सिके र, बुझे र समृद्ध ने पाल निर्माणमा लाग्ने बे ला भएको छ । यसै लाई लिएर ने पालीहरु धु्रवीकृत हु“दै छन्– अर्थात कांग्रे स र कम्युनिष्ट । स् वस् थ प्रतिस् पर्धा हो भने अब उज्यालो दिन शुरु भयो  । है न नचाहि“दो हो डवाजी हो भने पुनर्मूसिको भवः ।
हिजो आठ दल मिले र लो कगणतन्त्र ल्याउ“दा ठीक । एमाले –कांग्रे स, कांग्रे स–माओ वादी ठीक र माओ वादी–एमाले मिल्दा बे ठीक † अझ भित्रभित्रै एक प्रकारको हाहाकार किन ? मलाई त लाग्छ यो सब पुरानो रो ग हो । पुरानै धङधङी । मित्रहरुले सो ध्नुहुन्छ– अब के हुन्छ ? मै ले उत्तर दिन्छु– के ही हुन्न । कुनै ठूलो उत्पात हुन्न । संख्या तल माथि हो ला । चुनाव सम्पन्न हुन्छ । कसै ले कसै को पूर्ण निषे ध गर्न सक्दै न । बहुमत जुटाउने ले काम गर्न सक्यो भने मुलुकले का“चुली फे र्न सक्छ । सके न भने पुरानो जस् तै – नौ दिन चले अढाइ को षको गतिमा हामी अगाडि छौ ं ।
मौ काले आजै अक्टुवर क्रान्ति दिवस परे छ । संसारका मजदुर एक हो उ“ भने र नारा लगाउन नथाक्ने कम्युनिष्ट वामपन्थीहरु फे रि एक जुट हुन थाले का छन् । न बुझ्ने अकोर् पक्षलाई औ डाहा पनि भएको छ । मे रो विचारमा कसै ले आत्तिनुपर्र्दै न ।
कम्युनिज्मको मूल आदर्श समानतावाद हो  । यसै को प्रकाशमा दे श, काल, परिस् िथतिअनुसार विकास, निर्माण र समृद्धि ल्याउने हो  । कम्युनिष्ट हु“ भने र पनि कसै ले अन्ध पारम्परिक सो चमा आफूलाई सीमित गर्न हुन्न । अबका प्रजातन्त्रवादी हु“ भन्ने र कम्युनिष्ट हु“ भन्ने हरु आजको विश्वग्रामको
परिवे शलाई बुझ्दै नन् भने ती आफै मुर्झाउ“दै ओ इलाउ“दै जान्छन् । जस् तो अक्टुवर क्रान्तिले विश्व हल्लाइदियो त्यस् तै । तर त्यो भन्दा भिन्न अकोर् क्रान्तिले संसारका जाली फटाहा र मानवद्रो हीहरुलाई थर्काइदिन्छ । अक्टुवर क्रान्तिले शंखनाद गर्छ– गरिवी जन्मजात है न, भाग्यको खे ल है न, न त दै वको लीला नै हो  । बरु यो त मानवनिर्मित अमानवीय सिर्जना हो  । यसलाई फे र्न सकिन्छ । सुन्दर संसारलाई अझ सुन्दर बनाउन सकिन्छ । अन्याय, अत्याचार समूल नष्ट गर्न सकिछ ।
Previous: मेरो सपना साकार भयो
Next: राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा
वैदिक आर्यहरुको सांस्कृतिक धारा
बाल अधिकार, बाल दिवस र आजका बालबालिका
संघीय सहकारी ऐनमा सुधारको बाटो